ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ဆန့်ကျင်မှုများ - - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ
Fausto Ramirez | | ဂေဟစနစ်စိုက်ပျိုးရေး, အီကောလောဂျီ
အဆိုပါ၏ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ အဏ္ဏဝါ၊ ဘာကြောင့်ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုအသုံးမပြုတာလဲ ဂျာမနီတွင်ကုန်သွယ်သောဆော်လမွန်ငါးအများစုသည်ထိုမှဆင်းသက်လာသည် ငါးသားဖောက်။ သို့သော်ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်ဆိုးရွားသည့်အားနည်းချက်များရှိသော်လည်းမျိုးဆက်များသည်မကြာခဏမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲလေ့ရှိပြီးရေများသည်အော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကြောင့်ညစ်ညမ်းလာသည်။ အရာရာရှိသော်လည်းကျွမ်းကျင်သူအချို့ကငါးမွေးမြူရေးခြံများသည်သမုဒ္ဒရာများကိုကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုသာမကလူ ဦး ရေကိုပြုစုပျိုးထောင်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ လူဦးရေ ကမ္ဘာကြီး အဆက်မပြတ်တိုးပွားလာ။
ထဲမှာ နို့တိုက်ကျွေးရေး လူ့ငါးသည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးပရိုတင်းအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်၊ ကြက်နှင့်ဝက်သားထက်ပိုသည် တကယ်တော့ဒီနေ့လူသားတွေရဲ့ ၁၇% ဟာသူတို့ရဲ့ပရိုတိန်းလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးတယ်။ ၁၀ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်အတွင်း ၀ ယ်လိုအားသည် ၂ ဆများပြားလာလိမ့်မည်။ ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းမရှိလျှင်၎င်းကိုတုံ့ပြန်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ လိုအပ်ချက်များ ပရိုတိန်း ကြီးထွားလာလူ ဦး ရေ၏။ ငါးနှင့်အခြားအဏ္ဏဝါသက်ရှိများသည်ငါးများထက်နည်းသောအစာများဖြစ်သောကြောင့်ငါးမွေးမြူရေးသည်ဝက်သို့မဟုတ်တိရစ္ဆာန်မွေးမြူခြင်းထက်အမှန်ပင် ပို၍ အကျိုးရှိသည်။ တိရိစ္ဆာန်များ ကုန်းတွင်းပိုင်း.
တစ်ကီလိုထုတ်လုပ်ရန် အမဲသား ဥပမာအားဖြင့်ကာဗွန်ထုတ်လုပ်ရန်ထက်အစားအစာသည် ၁၅ ဆပိုများသည်။ ငါးသည်ငါးထက်စွမ်းအင်လျော့နည်းသည်။ တိရိစ္ဆာန်များ ကုန်းတွင်းပိုင်းအကြောင်းရင်းနှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်တွင်၎င်းတို့သည်သွေးအေးနေသောတိရိစ္ဆာန်များဖြစ်ပြီးသူတို့၏အတွင်းအပူချိန်သည်သူတို့နေထိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အလွန်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သည်။ နှင့်အခြားတစ်ဖက်တွင်, တစ် ဦး ရေနေပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရွေ့လျားအနည်းငယ်သာအားထုတ်မှုလိုအပ်သည်။
ကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနှင့်စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့၏အဆိုအရယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ပြားများပေါ်သို့ပြုလုပ်သောငါးတစ်ဝက်သည်ငါးရိုင်းများမဟုတ်ပါ။ သို့သော်၏အရေးပါမှုကို ငါးသားဖောက် တစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံမတူပါ။ ဥရောပအလယ်ပိုင်းတွင်ဂျာမနီကဲ့သို့ပင်တောရိုင်းငါးများသည်အများဆုံးရှာဖွေလေ့ရှိသည်။ သို့သော်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းသည်နှစ်ပေါင်းထောင်နှင့်ချီသောရိုးရာဓလေ့တစ်ခုဖြစ်သည်။ တဲများ။ ယနေ့အထိတရုတ်သည်ဤလက်အောက်ခံကုမ္ပဏီအတွင်းပထမဆုံးသောတိုင်းပြည်ဖြစ်ပြီးငါးထုတ်လုပ်မှု၏သုံးပုံနှစ်ပုံနီးပါးကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ငါးသားဖောက်.
အဆိုပါအဖြစ် ဒီမှာယဉျကြေးမှု သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ၀ န်ကြီးများထံမှဝေဖန်မှုများကိုပိုမိုဆွဲဆောင်လာသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ဖြေရှင်းရန်အစားငါးဖမ်းခြင်း၏ပြproblemနာကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။ အမှန်စင်စစ်၊ သားဖေါက်မျိုးစိတ်အများစုမှာအသားစားကြပြီးငါးမျိုးစိတ်များကိုကျွေးမွေးသည် medio သဘာဝက။ ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွင်ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းသည်အကြီးအကျယ်ထိခိုက်မှုရှိသည်။ အကြောင်းမှာဆော်လမွန်နှင့်မတူဘဲ၎င်းမျိုးစိတ်များသုံ့ပန်းအဖြစ်မမျိုးပွားနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်တောင်သူလယ်သမားများသည်ရိုင်းစိုင်းသောငယ်ရွယ်သည့်ဖမ်းဆီးရမိသောငါးများနှင့်အတူကျွေးမွေးသည် ငါး စျေးကြီး ပင်လယ်၌ဖမ်းမိ။ အိတ်များအတွင်းသော့ခတ်ထားသောတူနာများသည်မျိုးပွားရန်အခွင့်အလမ်းမရှိပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » အီကောလောဂျီ » ဂေဟစနစ်စိုက်ပျိုးရေး » ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ဆန့်ကျင်ဖက်လက္ခဏာများ -
တရုတ်နိုင်ငံ၏ရေတွင်း၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်ညစ်ညမ်းလွန်းသဖြင့်အရက်မူးရန်ဖြစ်သည်